Howlgal ciidan oo caawa ka socda magaalada Boosaaso – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaHowlgal ciidan oo caawa ka socda magaalada Boosaaso
Hiiraan Xog, Ammaanka Magaalada Boosaaso ee xarunta Ganacsiga maamulka Puntland ayaa si weyn loo adkeeyay Saacaddihii ugu dambeeyay ka dib markii halkaasi ay tageen Ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Puntland.
Ciidanka ayaa howlgallo Culus ka wadda Caawa Xaafaddaha ay ka kooban tahay Magaalada Boosaaso.
Howlgaladan oo ay sameynayaan Ciidanka Amaanka ee Maamulka Puntland ayaa waxa ay ka socdaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Boosaaso.
Jimcihii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii Masjid ku yaala magaalada Bosaaso lagu dilay Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo kamid ahaa Isimada ka soo jeeda maamulka Puntland.
Amaanka Masaajida wadamada caalamka oo aad loo adkeeyay